Isingaphansi kukahulumeni iMcCord | IOL Isolezwe
Isingaphansi kukahulumeni iMcCord
Isolezwe / 31 January 2013, 10:43am / PHUMLILE NTSELE
KUSUKELA kwesokunxele uNgqongqoshe wezeMpilo uDkt Sibongiseni Dhlomo , uSihlalo webhodi lase McCord uSolwazi Paulos Zulu neNhloko yoMnyango uDkt Sibongile Zungu esithangamini sabezindaba izolo
SESIWELE ezandleni zikahulumeni isibhedlela saseThekwini esike saba sezindabeni muva nje kulandela ukumemezela kwaso ukuthi siyavalwa ngenxa yokucwila ezikweletini nokwentula imali yoxhaso sikhala nangokuthi uMnyango wezeMpilo awucacisi ukuthi usazoqhubeka na nokusixhasa ngemali.
Esithangamini sabezindaba izolo uNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal, uDkt Sibongiseni Dhlomo, umemezele ukuthi isibhedlela iMcCord sesingesikahulumeni ngokusemthethweni kulandela isivumelwano ababe naso nebhodi nabaphathi baso ngoLwesibili ntambama.
“Ngemuva kwemibiko ebilokhu ivele njalo emithonjeni yabezindaba ngesinqumo sabaphathi besibhedlela sokuthi sivalwe ngoMashi sibe sesihlangana nabo sabazisa ukuthi sifuna ukusifaka ngaphansi kukahulumeni kwazise ukuthi bese sivele sime kabi ezimalini sekuwuMnyango kuphela obusixhasile,” kusho uDkt Dhlomo.
Uthi bese kunesikhathi eside uMnyango unxusa ukuba lesi sibhedlela sibe ngesikahulumeni kodwa abaphathi baso bengavumi bephusha umkhankaso wokuthi sisebenze njengesizimele.
Uveze ukuthi size savala ezinye izinhlelo ezimqoka ezifana nezokulashwa kwabahaqwe yigciwane, Isinikithemba Aids Programme, sabuye samisa nokuqeqeshwa kodokotela abangamathwasa ngoba sithi sesifuna ukuzimela futhi asinayo imali yokuqhuba lezi zinhlelo.
Ebuzwa ukuthi ingabe imisebenzi namaholo ezikhulu nezabasebenzi abebeqashwe yisibhedlela asazofana yini njengoba sesingesikahulumeni, uthe lokho kusazohlalwa phansi kudingidwe kuze kuvunyelwane ngokuzokwenzeka kodwa okwamanje basabhekene nokusindisa isibhedlela ekuvalweni.
“Okwamanje sisabhekene nokuvala ihlazo lokuthi singavalwa isibhedlela esidala kangaka emlandweni nesinomlando omuhle kangaka ekuqeqesheni nasekunikeni ngosizo lokwelashwa okusezingeni.Okunye sizokubheka ngendlela sisebenza,” kusho uDkt Dhlomo.
Ekuqaleni uMnyango watshela abezindaba ukuthi uma lesi sibhedlela sigcina singavumanga ukungena ngaphansi kukahulumeni njengoba bewukade wenza ezingxoxweni phambilini ngeke ukwazi ukuqhubeka nokufaka izimali zawo kuso futhi ngeke usitakule ezikweletini zaso.
Kodwa izolo uNgqongqoshe uthe nakanjani njengoba sesingesikahulumeni bazositakula nezikweletu zaso ngokubambisana noMnyango kaMgcinimafa.
Uthe izinguquko ezinqala ngesibhedlela nokuthi sizoqala nini ngokusemthethweni ukungabi yisibhedlela esikhokhisayo zizocaca ngemuva konyaka wezimali ozoqala ekupheleni kukaMashi kodwa okwamanje sisazoqhuba ngendlela yaso endala kuze kube nguMashi.
Lesi sibhedlela besenza inzuzo ka-R7 million ngonyaka kodwa leyo mali igcine imisebenzi yaso ingabuyeli kuhulumeni yize bekade engene ngomkhono ekusixhaseni.
USihlalo webhodi lesibhedlela, uSolwazi Paulos Zulu, uthe isinqumo sabo sokungena kuhulumeni kube yisivumelwano ngemuva kwezingxoxo, wathi: “Ayikho ingcindezi ebesinayo ngesinqumo esisithathile kodwa konke kube yimiphumela yezingxoxo nobudlelwano bokusebenza kwethu noMnyango.”